Nepali Rajneeti | एमसिसीबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको यस्तो चतुर जवाफ !
एमसिसीबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको यस्तो चतुर जवाफ !
पुष १४, २०७८ बुधबार ५०२ पटक हेरिएको
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख राजनीतिक दलहरुकाबीच सहमति र राष्ट्रको हित अनुकूल हुने गरी एमसिसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टीको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) द्वारा आज परासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,“ पार्टीले समय आएपछि एमसिसीका विषयमा निर्णय लिन्छ ।
यस विषयमा सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।” अध्यक्ष यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको प्रदेश बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहको संरचना पनि परितर्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यता,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पुनः एकताको पर्खाइमा रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
नजिकिँदै प्रचण्ड आइतबार बिहान प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर माओवादीको ८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको अतिथि बनेर आइदिन अनुरोध गरे । ओलीले आफु काठमाडौँ बाहिर रहेकाले महासचिव शंकर पोखरेललाई पठाउने जवाफ दिए । एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै महासचिव पोखरेल माओवादीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भए ।
त्यस दिन बिहान ओली–प्रचण्ड बीचको फोन वार्ता हार्दिकतापूर्ण रुपमा सकिएको स्रोत बताउँछ । तत्कालिन नेकपा विभाजनपछि ओली र प्रचण्डबीच भएको यो तेस्रो फोन संवाद थियो ।उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्ने क्रममा पनि प्रचण्डले ओलीको कुनै आलो’चना गरेनन् । बरु कम्युनिष्ट शक्तिहरुबीच एकताको घुमाउरो कुरा गरे ।
यसअघि एमाले र माओवादीको एकता भएर बनेको तत्कालिन नेकपा पनि चीनकै कम्युनिष्ट नेताहरुको दौडधूपले सम्भव भएको थियो भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या हुँदै आएको छ ।